mhando 0.9.7.2 – Wakafupisa shortcodes
Chikunguru 29, 2015 kubudikidza chipo Leave a Comment
Kusunungurwa chitima yave pakupedzisira anhonga vamwe nokukurumidza, saka isu vanozvikudza kupa shanduro itsva iyi.
Shanduro iyi unocherekedza Google Marshal zvakare, Izvi zviri kuitika nokuti pane zvinhu zvechokwadi tinogona kudzora. asi zvakare, zvinoshanda.
Rimwe kuchinja zvimwe unocherekedza vari shortcodes, unogona kuverenga zvakawanda nani mapepa zvinotevera kubatana:
Shortcode rutsigiro Transposh Wordpress plugin
Huru Kuchinja zvinosanganisira okuwedzera [tpe] shortcode iyo akawedzera pamusoro vakwegura .
Bumbiro iri rakashandiswa kuzvida zvakapoteredza Codes, kwazvisina zvakakodzera kuvhara chipepa, izvi nokuti caveat muna Wordpress iyo hunokonzera
bumbiro remitemo parsing kuenda Berserk apo nokusanganisa self akanyudzwa uye okupedzisa shortcodes.
wo, hapana chikonzero tsanangurai ="y" zvakare, saka ikozvino [tpe mylang] achaita nyore kushanda uye goho: sn
Tinokukurudzira kuti ndiwedzere, uye vanakidzwe shanduro itsva iyi.
mhando 0.9.7.1 – Tine nzvimbo itsva
Chikunguru 22, 2015 kubudikidza chipo Leave a Comment
First chinhu chokutanga, tinoda kukutendai Christopher zvikuru kubva LPK Studio – http://lpkstudio.com/ zvitsva akaitwa website yedu, Website mutsva uyu pakupedzisira kuti nhasi rebuve mitemo mitsva uye kunofanira kuoneka kwaunoita Mobile namano.
Taifadzwa vachishanda Christopher iri, uye akanga zvikuru nyatsoshanda, wirirana uye aiziva kuti taida kunyange tisati akabvunza 🙂
The Website itsva vaine kusunungurwa itsva, hapana zvikuru pano asi netsikidzi shoma vakanga vaenda nzira waDhodho.
Unogona zvakare kushandisa + chiratidzo mukati shanduro
Mune dzimwe nguva, refu ndima havana kuwana zvakakodzera otomatiki shanduro kubva Google
Kuvhura shanduro yekare haana kushanda 0.9.7.0
Nakidzwa shanduro itsva, chokuti iwe ndiwedzere iyi zvizere Version, zvayo yakasununguka.